Auto, Moto | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Auto, Moto
Nguva yechando ichangopera, nematambudziko ayo muchimiro chema reagents anokanganisa kubva mumigwagwa, uye vatyairi vemota vakakwanisa kufema kugomera kwekuzorora, apo rimwe, risina dambudziko rakakomba rakaonekwa padhuze. Aya ndiwo poplars, ...
Iyo mamiriro kana bhatiri ikakundikana inozivikanwa kune chero muridzi wemota. Semutemo, izvi zvinoitika panguva isingakodzeri uye zvinotyisidzira nematambudziko akakomba. Kana mumadhorobha mamiriro, kubudiswa kwebhatiri kunotyisidzira kunonoka ...
Nekudaro, matori ekutora ndiwo akajairika muUnited States. Uyezve, America ndiyo nyika yavo. Nhoroondo yemotokari yakatanga nehana banal. Vagadziri vekambani ye "Chevrolet" (iyo yekutora yakaita kuti ive nemukurumbira ...
Lada Kalina chiteshi chengoro uye hatchback: hwokugadzira zvechadenga. "Lada Kalina 2" - chitsva chizvarwa mota
Muna 2013, AvtoVAZ yakafadza vatyairi vane nyowani nyowani, umo mune zvese hunhu hwakagadziridzwa. Lada Kalina 2 ndeyemberi-vhiri rinotyaira mota ine chigaro chepamusoro uye nzvimbo yakakura kwazvo ...
Saka ndeipi mota yaunofanira kutenga ye200000? Muchokwadi, pane zvirinani zvisingaenzaniswi hombe nhamba yesarudzo. Sezvavanotaura - pane yega kuravira uye ruvara. ChiGerman, chiJapanese, ChiRussian, chiAmerican - chero ...
Iyo vharafu vharuvhu muVAZ-2114 mota ndeimwe yeasina kusimba mapoinzi eiyo inotonhora system. Iyo inoputsika kazhinji zvekuti vazhinji varidzi vemota, vawana ruzivo, vanoichinja kuita ...
Dhizaini yemudhudhudhu uye injini yedhiziri yakaumbwa panguva imwecheteyo. Nekudaro, izvi zvishandiso zvakapfuura nenzira dzakasiyana dzekushanduka-shanduka. Vashoma vangadai vakafungidzira kuti rimwe zuva izvi zvigadzirwa zvinoshanda ...
MaSUV uye crossovers imotokari dzine kugona kukuru. Zvese zviri muguta nekunze kwenzvimbo, ndidzo shamwari dzako dzakavimbika. Chii chinonzi crossover (mota) Crossovers nyowani ...
Kambani yeBritain JCB inozivikanwa pasi rese nekuda kwehunhu hwayo hwepamusoro hwekuteedzera nemavhiri. Vanodzosera backhoe vanogara munzvimbo yakakosha musanganiswa yekambani. Imwe yemhando dzakakurumbira dzemhando iyi ...
"Lada 2170" ("Priora"): magadzirirwo, ongororo
Lada Priora-2170 imotokari yakatanga kugadzirwa neAvvaVAZ muna 2007 sedan. Gare gare, muna 2008, hatchback yakapinda mukugadzirwa kwakawanda, uye muna 2009, chiteshi chengoro. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ...
KamAZ-65115, izvo zvehunyanzvi hunhu izvo zvichapihwa pazasi, zvakagadzirwa kubvira 1995. Rori yakazotengeswa muna 1998. Iyo irori yekurasa marori inotakurwa uye kuburutswa kubva kumashure ...
Nhasi, kugadzirwa kwemotokari kunoitwa munzira dzakasiyana siyana. Nekudaro, iyo inonyanya kufarirwa kuputira mota nevinyl firimu. Izvi zvinhu zvinowanikwa kubva kune vazhinji vagadziri. Iyo assortment yakakura kwazvo iyo inosarudza iyo chaiyo ...
Patron Taker 250 mudhudhudhu ane chinonyengera chitarisiko. Pamusoro pekuongororwa kunoonekwa, mumwe anowana fungidziro yekuti uyu muenzaniso wekare wevamwe "maJapan". Asi vese nyanzvi uye vafambi vemidhudhudhu vanobva vangoti, ...
Injini inoda kukwizwa here kana ichichinja mafuta? Pane akawanda autoforums iwe unogona kuwana nharo hurukuro dzeiyi nyaya. Vatsigiri veese maviri maonero ekuona vane zana muzana vane chivimbo chekuti vakarurama, vachipa mhando dzese dze ...
"Lada Granta" sedan: magadzirirwo uye wongororo dzevaridzi
"Lada Granta" (sedan) izita rebhajeti pamberi-vhiri mota, iyo yakagadziriswa neVolga Automobile Plant. Lada Kalina modhi yakatorwa sehwaro. Serial kugadzirwa kwakatanga muna 2011, uye mu ...
Chero mutyairi, uye kunyangwe iye anotanga, anofarira mubvunzo weiyo injini yemafuta yekusarudzira mota yake, pasherufu hupenyu, kuumbwa uye zvimwe zviratidzo. Vanoti pakupera kwehupenyu hwayo hwebasa, kunge ...
Padanho rekutanga kuve nemota yako wega, muridzi anonyanya kutarisa pamamiriro ezvinhu emugwagwa. Nekufamba kwenguva, kunzwisiswa kwezvimwe zvinhu zvemota yako kunouya. Izvo zvinove zvinogoneka kuzviongorora-wega kuongorora kuparara kwemotokari (yakaonekwa ...
Kudzora mota uremu ndiko kutanga kurema kwakaenzana
Munzvimbo dzemotokari uye zvese zvakabatana nazvo, pane pfungwa mbiri dzakadai sekurema kwemotokari uye kurema kwehuremu. Aya ndiwo maitiro maviri anogara achitaurwa nezvazvo mumakirasi ezvidzidzo ...
Kana bhatani rinodzora bhatani pamotokari rikamira kushanda, saka kutyaira pamotokari iyoyo kunogona kuita hope dzinotyisa. Iwindo rakashama mukutonhora kwechando kana yakavharwa mukupisa kwezhizha - izvi zviri pachena ...
Chevrolet-Niva, kabhini firita: kutsiva. Chevrolet Niva inogadzirwa neGM-AvtoVAZ
Iyo Niva Chevrolet mota ndeimwe yemhando dzekutanga dzakaburitswa neAvtoVAZ, iyo yakaiswa firati kabhini kubva kufekitori. Chinhu ichi chine basa rakakosha. Nezve chimiro chayo, mhando uye kutsiva - zvimwe ...
peji 1 peji 2 ... peji 29 Next Page
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,427 masekondi.